လက်ရှိ အစိုးရသက်တမ်းကုန်ဆုံးကာနီးတွင် ဦးကျော်နီနိုင်(ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်) လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲ????? ~ Myanmar Online News
လက်ရှိ အစိုးရသက်တမ်းကုန်ဆုံးကာနီးတွင် ဦးကျော်နီနိုင်(ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်) လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲ?????
2:07 AM ဆောင်းပါး No comments
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၂၄ရက်က နေပြည်တော်၌ ကျင်းပသည့် ပြည်ထောာင်စုလွှတ်တော်တွင် ကျေးလက်ဒေသလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှု မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ထံမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၇၁.၂၇ သန်း ချေးငွေရယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ကြရာတွင် ရှမ်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁၁) အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ​ဦး​ကျော်နီနိုင်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် ပြည်သူများ၏ ကန့်ကွက်မှု​ကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကာလ၌ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရသည့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို အစိုးရချင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သင့်​ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးခဲ့သော မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်စသင့်ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ် လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေးမှုသည် ပါတီ၏ သဘောထား မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဦးကျော်နီနိုင်၏ တစ်ဦးထဲ ဆန္ဒသာ ဖြစ်ကြောင်း လည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးသိန်းထွန်းဦးက တုန့်ပြန်ပြောဆိုထားသည်။
ထို့ပြင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာ နန္ဒာလှမြင့်ကလည်း “မြစ်ဆုံကိစ္စအဆိုတင်တာက ကျွန်တော်တို့ ပါတီရဲ့ လမ်းညွှန်ချက် မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကဥပဒေနဲ့ ပက်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ Legally Advise လုပ်တယ်လေ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်တာတို့ ဘာတို့ ကိစ္စရင်တော့ ပါတီကနေ Advise လုပ်တယ်။ ကျန်တာတော့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် လွတ်လပ်စွာ ပြည်သူ့ရဲ့ လိုလားချက် သို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့ တွေးခေါ်ယူဆချက်ကို လွတ်လပ်စွာ လွှတ်တော်မှာ တင်ခွင့်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပါတီက ထိန်းချုပ် မထားဘူးလေ။ ဒါဟာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ သူတို့ရဲ့ အမြင်အရသူသိလိုတဲ့ကိစ္စ၊ အကြံပြုလိုတဲ့ကိစ္စကိုအကြံပြုတယ်လို့ ဒီလိုပဲနားလည်တယ်။ ပါတီရဲ့ မူဝါဒ လမ်းညွှန်ချက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပါတီရဲ့ လမ်းညွှန်ချက် မဟုတ်ဘူး။ မြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပါတီတွင်းဆွေးနွေးချက်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအစိုးရ လက်ထက်ကရပ်ခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရ ဖြစ် လာခဲ့ရင်လည်း ပြည်သူ့ရဲ့ သဘောထားဆန္ဒအတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းသည် ယခင် တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်၌ တရုတ်အစိုးရနှင့် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တို့ ညှိနှိုင်းအကောင်ထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စီမံကိန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း ဦးသိန်းစိန်သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ယူပြီးနောက် ကချင်တိုင်းရင်းသားများအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံသားများက မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းရေးကို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြမှုကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအတူ လက်ရှိ အာဏာရ အစိုးရ NLD ပါတီ လက်ထက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလ၌ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကချင်ပြည်နယ် မဲဆွယ်ရေးခရီးစဉ်၌ NLD ပါတီအစိုးရဖြစ်ပါက မြစ်ဆုံစာချုပ်ကို ချပြပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုထားသည်။
ထို့ကြောင့် လက်ရှိ အစိုးရသက်တမ်းကုန်ဆုံးကာနီးတွင် ကျော်နီနိုင်(ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်) လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းသည် မည်ကဲ့သို့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်ဖြစ်နေပြီး လက်ရှိ အာဏာရ အစိုးရ NLD ပါတီ လက်ထက်တွင်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ကတိကဝတ်ဖြစ်သည့် မြစ်ဆုံစာချုပ်ကို ချပြပေးသွားမည်ဆိုသည့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ကတိကဝတ်များကို စောင့်ကြည့်ဆုံးဖြတ်ပေးရမည့် အခြေအနေတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပရိသတ်များရဲ့ မှတ်ချက်ပြုမှုများကိုလည်း ရေးသားထားခဲ့နိုင်ပါသည်။